October 2015 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
အရှုံးကိုရိုးသားစွာရင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းဟာ၊ ပန်းများကိုပွင့်စေခြင်းပါပဲ (မင်းဒင်)
ငါကဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဟုတ်လား။ ခက်ပါ့ကွာ။ ကျုပ်ပြောတဲ့ဆရာဆိုတာ၊
မင်းတို့ဟာလေ၊ အဘ၊ အဘလို့ အခေါ်ခံရတာကို၊ ဘဝင်လေဟပ်ပြီး၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောကသုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေလို့ ထင်တလုံးဖြစ်နေတဲ့သောက်ကျင့်က အခုထက်ထိမပျောက်ချင်သေးပဲကိုး။
Author: lubo601 | 5:21 PM | No မှတ်ချက် |
Advanced Engineering Myanmar LLC
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု National Highway System ထဲမှာ ရှိတဲ့ လမ်းတွေရဲ့ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကတ္တရာလမ်းတွေ ဖြစ်တယ်။ ကတ္တရာဟာ ကွန်ကရစ်ထက် အားသာမှုတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ခေတ်မှီ material science တွေ၊ mix design တွေကို သေချာနားလည်ဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အင်ဂျင်နီယာတွေဟာလည်း ဒီနည်းပညာတွေကို သိခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ရင် လမ်းမိုင်များများ ခင်းနိုင်မယ်။
ဂျစ်ဆီလိုဘဝမျိုးနဲ့ နေထိုင်ရသူဆိုတော့ ဒီနေ့ မြောက်ဒဂုံကနေ သာကေတကို ပြောင်းရပြန်ပြီဗျာ။ တစ်ခါ ပြောင်းတိုင်း ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့စရိတ်တွေက အိမ်လခနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းကပ်လိုက်နေတော့တယ်။
ရပ်ကွက်တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းတိုင်း စိတ်ဆင်းရဲစရာ ကောင်းတာက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာပဲဗျ။ ခုလည်း နေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်ကို မရောက်သေးဘူး ရှေ့ပြေးသွားပြီး ရှင်းလင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရုံရှိသေးတယ်။
“မင်းတို့ ကုလားတွေလား” လို့ စော်စော်ကားကား လာမေးတာ ခံလိုက်ရတယ်။ လူပုံတွေက ဘယ်လိုမှ ကုလားပုံ မပေါက်တဲ့ ဗမာစစ်စစ်တွေကို ကုလားတွေလားလို့ လာမေးတယ်ဆိုကတည်းက စော်ကားမှုစတင်ပြီပေါ့။ ဒီရပ်ကွက်ထဲ ပြောင်းလာ တဲ့ကောင်တွေကို ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းထားမှဆိုပြီး ပညာပြချင်တာ သေချာနေပြီပေါ့။
ပြီးတော့ သူတို့ကို အကြောင်းမကြားဘဲ အိမ်ငှားထားရသလားဆိုပြီး အပြစ်တင်သေးသဗျ။ အိမ်ရှင်က ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရိုက်အပေးအယူလုပ်ပြီး သူ့အခန်းမှာနေဖို့ ခွင့်ပြုထားတာ သူတို့ ရပ်ကွက်ကို အကြောင်း ကြားရမှာလားဗျာ။
Author: lubo601 | 5:00 PM | No မှတ်ချက် |
Ko Pauk Sa
ဦးချန်ထွန်းသည် ၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်၌ရောမ ဥပဒေဘာသာရပ်၊ ဥပဒေ အတတ်ပညာ ဘာသာရပ်၊ အင်္ဂလိပ် လူမျိုးတို့၏ ရှေ့ ဟောင်းထုံးတမ်းစဉ်လာ ဘာသာရပ် အားလုံးကို အမှတ်အများဆုံး ဂုဏ်ထူးနှင့် အောင်မြင်၍ ၀ိတိုရိယဘုရင် မကြီး ကိုယ်တိုင် ၀ိတိုရိယ ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်တိုင်းတွင် ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့၍ ဘာသာ ရပ်တခုလျှင် ထိုခောတ်က စတာလင်ပေါင် (၁၀၀)စီ ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
Author: lubo601 | 4:50 PM | No မှတ်ချက် |
ကျီးကန်းတို့ ဇရက်တို့ ကျားတို့ ဆင်တို့
Author: lubo601 | 4:46 PM | No မှတ်ချက် |
သွားတိုက်ဆေးကို လူတိုင်းသုံးနေကြ၊ သိနေကြပေမယ့် သွားတိုက်ရုံသာမက အခြားနေရာတွေမှာပါ သွားတိုက်ဆေးက အလွန်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ world inside pictures.com မှာ တင်ပြထားပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:42 PM | No မှတ်ချက် |
စာတွေလည်း သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သလောက် သင်ခဲ့ပြီ၊
ဒါပေမယ့် တချို့အကြောင်းအရာတွေကို ခုထိနားမလည်နိုင်သေးဘူးဗျာ။
ငယ်ငယ်က တာဇံဇာတ်ကားတွေကြည့်တော့ ဇာတ်လိုက်တာဇံက ကျားသစ်ရေလေးပဲ ခါးပတ်လို့။
ဒါနဲ့ အဖေ့မေးကြည့်တယ်... ...
လမ်းတစ်လမ်းဖောက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပလန်ချကြမလဲ၊ ဘယ်လို ဒီဇိုင်းဆွဲကြမလဲ။ လမ်းဖောက်တယ်ဆိုတာ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အလုပ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်လောက်ကိုပဲ သိနေပြီး အင်ဂျင်နီယာရှူထောင့်ကပဲ စဉ်းစားတည်ဆောက်သွားလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ - ယာဉ်ကြပ်လို့ဆိုပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားနားမှာ ဂုံးကျော်တံတားအမြှင့်ကြီးတွေ သွားဆောက်လို့ မရဘူး။
Achilles heel ဆိုတာကတော့ အခု အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုံးမှာ တွင်ကျယ်စွာ သုံးနေခဲ့တဲ့ အီဒီယမ် တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါမ ဒဏ္ဏာရီ ထဲက ဆင်းသက်လာပါတယ်။
နတ်ဘုရားတွေက အာချီလီ ဆိုတဲ့ ကလေးကို နတ်ရေကန်ထဲ ခြေနှစ်ချောင်းက ကိုင်ပြီး စိမ်ကာ ဘယ်လို ရန်သူကမှ သူ့ အပေါ် အောင်မြင်မှု မရအောင် စီရင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ခက်တာက ခြေထောက် နှစ်ချောင်းက ကိုင်ပြီး ရေထဲကို အနှစ်ခံလိုက်ရတဲ့ အာချီလီရဲ့ ခြေထောက်က ရေမထိခဲ့ပါဘူး။
မနေ့က သမ္မတကြီး ငပုတောကို သမ္မတခရီးလိုလို၊ ပါတီစည်းရုံးရေးယောင်ယောင်၊ မဲဆွယ်သလိုတစ်နည်း ခရီးထွက်စဉ်က ပြောသွားတဲ့ စကားဟာ အကြောင်းမဲ့ ပြောသွားတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
စိမ်းလဲ့ကန်သာ ငါးလောင်းပြိုင် နေအိမ်တွင် စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်မှု စီအိုင်ဒီ ကန့် ကွက်ထားခြင်းမရှိ
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အနာဂတ်နဲ့ ဒုတိယ တော်လှန်ရေးနေ့ [သရ၀ဏ် (ပြည်) ]
NLD လွှတ်တော်အမတ် မဲဆွယ်စဉ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်သူများကို ဖမ်းဆီးထား
ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသစွန့်ခွာ၍ အလုပ်ရှာသူများလာ
ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကို ပြည်သူတို့ အပြည့်အဝ မရနိုင်တဲ့ အခါကြတော့ အချင်းချင်း ပြန်စောင့်ရှောက်ကြရန် ၈၈ ငြိမ်းပွင့်ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် မှာကြား
လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ကို လျစ်လျူရှု၍ မလုံခြုံဘဲ ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဟု ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း ပြော
တောင်ယာထဲ မကွဲသည့် ကျည်ဆံများ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးရန်တောင်သူများတောင်းဆို
မတ္တရာတွင် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် (၃) ဦးမှ ဓားထောက်လုယက်
ဟာသချည်းသက်သက်ပြောသူမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးစကားလည်း ပြောသဖြင့် ဟောပြောခွင့်ပင် အပိတ်ခံရသူ ဗေလုဝနှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း
အီရတ်ရှိ စစ်စခန်းဟောင်း ဒုံးကျည်နဲ့ အပစ်ခံရ
မဲရုံဧရိယာအတွင်း ကား၊ ဆိုင်ကယ်များ NLD စတစ်ကာမကပ်ရန် မန္တလေးတိုင်း အတွင်း အသိပညာပေးပွဲ လုပ်ဆောင်မည်
Author: lubo601 | 9:26 PM | No မှတ်ချက် |
မိန်းမပျိုတဦးဟာ လူခြေရှင်းစ ညအချိန်မှာ တယောက်တည်း
အငှားယာဉ်စီးလာပါတယ်။ မဲမှောင်ပြီး လူပြတ်တဲ့ နေရာတွေ
ရောက်တဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေက မသမာသူ အငှားယာဉ်
မောင်းသမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်အချို့ကို ကြားသိရပြီး ငါမှားပြီ
လားလို့လဲ တွေးမိပါတယ်။ ကားသမားကို အကဲခတ်ကြည့်
တော့လဲ ဦးထုပ်ငိုက်ငိုက်နဲ့ တစုံတရာကို သဲသဲမဲမဲ ကြံစည်
Thein Than Win-Happiness
တစ်ပွေ ဗေဒင်ဟော နေတာကို
ဘေးက လူငယ် အုပ်စု ၄,၅ယောက် က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလို စောက်ခွက် ပြောင်နေကျသည်။
အဲ့ဒါ နဲ့ ဘိုးတော်လဲ ကြာလာတော့ ပေါက်လာပြီး "ဟေ့ရောင်တွေ မင်းတို့ ငါ့ကို ဘာထင်နေလဲ ..ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ် သွားမယ် ထင်လဲ!"
မည်သူ မဆို တစ်နေ့ မုချ သေရမည် ။ နေတတ်ဖို့ လိုသလို သေတတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပေသည် ။
သေ တတ်အောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားဖို့ လိုသည် ။ ကုသိုလ် ကောင်းမှု တွေ ဘယ်လောက် များများ သေခါ နီး စိတ်ထား မတတ်လို့ ဘဝကူး မကောင်းသူတွေ များလှ၏ ။ သေပုံ သေနည်း မတတ်လို့ ပြိတ္တာ ဖြစ်၊ တိရ စ္ဆာန် ဖြစ် ၊ ငရဲ ကျသူတွေ အများ အပြား ရှိ၏ ။
မည်သူ မဆို သတ္တဝါ တို့ မည်သည် ရေနစ်တဲ့ သူဟာ အားကိုး တကြီး တွေ့ ရာဆွဲယူ တတ်သလို သေခါ နီး တဲ့ အခါ စွဲမိ စွဲရာ စွဲတတ်ကြသည် ။ မခွဲနိုင် မခွာ ရက် တပ်မက် စွဲလမ်းနေတတ်ကြသည် ။
“ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲနှင့် နောက်ထပ်ပြောင်းရန် အခြားမရှိဘဲ ကွန်မြူနစ်ပဲ ရှိတော့ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြား”
“ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲနှင့် နောက်ထပ် ပြောင်းရန် အခြားမရှိဘဲ ကွန်မြူနစ်သာ ရှိတော့ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ငပုတောမြို့နယ် ဥသျှစ်ကွင်း ကျေးရွာ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံချိန်တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်”
“သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က ၎င်း၏ ဇာတိဖြစ်သော ငပုတောသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဥသျှစ်ကွင်း ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်”
အထက်က စကားတွေက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စကားကောက်နုတ်ချက်တွေ။ Eleven Media Group က Facebook ပေါ်တင်လိုက်တာ ဖတ်လိုက်ရပြီး ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေ အခြောက်ခံနေရတဲ့ စစ်အစိုးရဟာ ခုထိ မရှိတော့တဲ့ ကွန်မြူနစ်နဲ့ ပြည်သူကို ဖြဲချောက်နေတုန်းပါလားဆိုပြီး အံ့အားသင့်သွားမိသဗျာ။
အိန္ဒိယရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီ အင်္ဂလန်မှာ ဥပဒေပညာ သင်ယူနေတုန်းက သူနဲ့ မတည့်တဲ့ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်..။ သူ့နာမည် မစ္စတာ A ဆိုကြပါစို့ ..။ အဲဒီပါမောက္ခဟာ ဂန္ဒီကို ကြည့်မရသူပီပီ တနည်းနည်းနဲ့ ချိုးနှိမ်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဂန္ဒီက စာတော်သူ ဖြစ်လေတော့ သူချိုးနှိမ်လို့မရအောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
ကတ္တရာလမ်းတွေဟာ Fatigue လို့ခေါ်တဲ့ နှစ်ရှည်လများ ၀န်အလေးချိန်သက်ရောက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရမယ်။ ကတ္တရာလမ်းတွေကို Flexible pavement လို့ ခေါ်တယ်။ ကွန်ကရစ်တွေလို မဟုတ်ပဲ ကတ္တရာလမ်းတွေက flexible ဖြစ်တယ်။ လမ်းပေါ်ကို သက်ရောက်လာတဲ့ ၀န်အလေးချိန်ကို အောက်ခံ အလွှာတွေနဲ့ မျှတတောင့်ခံပေးတယ်။
သမိုင်းလမ်းဆုံ ယာဉ်တိုက်မှု လူ ၁ ဦးသေ ၊ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
ပေါင်းတင်ခန်းအတွင်း ပိတ်မိ သေဆုံး သွားခဲ့သည် အမျိုးသမီး
SSPP/SSA နှင့် အစိုးရ စစ်တပ်တို့ အကြား မိုင်းရှူးမြို့နယ် မိန်းအက်တွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်ကျဆုံးသူ စာရင်း အတိအကျ မသိရသေး
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုအား သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေးအနီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ဘီလီယံနာ သူဋ္ဌေးအား ၁၆ နှစ် ကြာမှ ဘဏ်ဓါးပြအဖြစ် ဖမ်းမိ
ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရေး အတွက် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲများ ယနေ့ စတင် မဲပေးခွင့်ပြု
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ည ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်အား အစိုးရတပ်ပစ်ခတ် ဒေသခံ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ ကျပ်သိန်းရာကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံး
၀ါကျွတ်လပြည့်နေ့ ALA သီချင်း အသံချဲ့စက်ဖြင့် ဖွင့်ရာမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို စစ်တပ်က ၀င်ရောက်ပြီး လူငယ် နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးမှု ဖြစ်ပွား
မဲလိမ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာနှစ်ရာကျော် ပြည်တွင်းသို့ မဲလာပေးမည် ဟုဆို
Author: lubo601 | 1:57 PM | No မှတ်ချက် |
သီတင်းကျွတ်မှာ ဘာကိုသတိအရဆုံးလဲ လို့မေးရင် ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဘဝကိုသတိရသွားပြီး အဲသည်ကလေးဘဝတုန်းက နှစ်တိုင်း သွားသွားကန်တော့ခဲ့တဲ့ သက်ကြီးဝါကြီးတွေ အကုန်ပါပါတယ်။ လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက အမျိုးထဲရှိရှိသမျှ သက်ကြီးဝါကြီးတွေနဲ့ အိမ်နီးနားချင်း လူကြီးသူမတွေကို ကိတ်မုန့်ကလေး၊ ဖယောင်းတိုင်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်ကန်တော့ရတာ အလွန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ တစ်နှစ်နေနေ တစ်နွေဆန်းဆန်း မတွေ့ဖြစ် မဆုံဖြစ်တဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်း သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါကျမှ တကူးတက လာကန်တော့ သွားကန်တော့ရင်း ပြန်လည်ရင်းနှီး နွေးထွေးစေခဲ့တာလည်း အမှတ်ရမိတာပဲ။ မုန့်ဖိုးတွေလည်း အများကြီးရတာပေါ့။ ကိုယ့်မောင်နှမချည့်ပဲ ခြောက်ယောက်တောင်ရှိတာဆိုတော့ အမြဲလို ကိုယ်ကသာ ခေါင်သူကြီးလုပ်ပြီး မုန့်ဖိုးအများဆုံးရတယ်လေ။ ကိုယ့်အဖွားနဲ့ မတိမ်းတယိမ်း ဖိုးလေးဖွားလေး၊ ဒွေးလေးကြီးဒေါ်တွေကို လိုက်ကန်တော့တဲ့အခါ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ ကိုယ်တို့မောင်နှမတွေနဲ့ သက်မကွာရွယ်မကွာ ဝမ်းကွဲမောင်နှမ တူအရီးသားချင်းတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး လက်ပံပင်ဆက်ရက်ကျတာ ထုံးစံပါပဲ။
Author: lubo601 | 1:31 PM | No မှတ်ချက် |
Traffic အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို အသေးစိတ်လေ့လာလိုသူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များမှာ လက်ရှိသင်ကြားနေတဲ့ စာအုပ်တစ်ခုပါ။ အောက်ပါ လင့်မှာ ဒေါင်းလို့သော်လည်းကောင်း၊ အဆင်သင့်ဖတ်လို့သော်လည်းကောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်များ, လေ့လာရန် လမ်းညွန်
Author: lubo601 | 1:27 PM | No မှတ်ချက် |
January 28 · Edited ·
ကတ္တရာလမ်းတစ်ခုဟာ ကွဲအက်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း မရှိပဲ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ တာရှည်ရမယ်။ ရေတိုက် စားမှုဒဏ်၊ စိုထိုင်းဆစိမ့်ဝင်မှုဒဏ်တွေကို တောင့်ခံနိုင်ပြီး ကျောက်သားပေါ်က ကတ္တရာ ကွာကျတာမျိုး မရှိသင့်ဘူး။ မျက်နှာပြင်ဟာ အလွန်တရာချောနေခြင်းမရှိပဲ ကားဘီးနဲ့ သဟာဇာတ ဖြစ်နေ ရမယ်။ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အလွယ်တကူ ခင်းနိုင်ရမယ်။
Author: lubo601 | 1:20 PM | No မှတ်ချက် |
ဆရာတော် ဦးနရိန္ဒ (ငြိမ်းချမ်းရေး)
တစ်နေကုန်သွားလာလှုပ်ရှားရင်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောက်ရှိလာသော အပူအခိုးအငွေ့များသည် ညအိပ်ချိန်တွင် အထက်သို့တက်ကြသည်။ အိပ်ပျော်နေရင်း ခေါင်းချွေးများထွက်ခြင်း၊ သွားရည်ကျခြင်း၊ အစာမစားဘဲ ပါးစပ်မှဝါးခြင်း၊ သွားကျိတ်ခြင်း၊ ကယောက်ကတမ်းပြောခြင်းများသည် လေပူအထက်သို့ တက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည်။
Author: lubo601 | 1:12 PM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ရှိ မဲရုံများ၏ ရလဒ် အခြေအနေများကို ထုတ်ပြန်ပေးရန် သတင်း အချက်အလက် စင်တာ နှစ်ခု ဖွင့်မည်
တရုတ်ကျွန်းတုများအနီး အမေရိကန် စစ်သင်္ဘော ဖြတ်သန်း
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို လှောင်ပြောင်၊ အသရေဖျက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ မချောစန္ဒီထွန်းကို မအူပင်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်
မယားအသစ်ကလေးကို မယားကြီးအိမ် ခေါ်ယူပေါင်းသင်းသူ မျိုးစောင့်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံရ
၂၀၂၀ မှာ ဆော်ဒီနိုင်ငံ ဒေ၀ါလီခံရကိန်းရှိဟု IMF သတိပေး
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်ကို ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုမည်ဟုဆို
ထိုင်းကျောင်းသူ အသတ်ခံရမှု မြန်မာနိုင်ငံသား လေးဦးက ၀န်ခံချက်ပေးပြီဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို
ဝက်အူချောင်းလို ပြုပြင်ထားတဲ့ အသားတွေက ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိနှစ် ၆၀ အင်တာဗျူး
Author: lubo601 | 7:19 PM | No မှတ်ချက် |
ကျမချစ်သူက ဘီလံနာသူဌေးကြီး ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ အလုပ်ကို ရိုးသားကြိုးစားလုပ်ချင်စိတ် ရှိနေဖို့ပဲ လိုတယ်။
ကျမချစ်သူက နောက်ခံ background တောင့်တင်းတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင် ရှင်းခဲ့ဖို့ပဲ လိုတယ်။
သူများကို နားလည်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်တာနဲ့ဟာ ဆက်စပ်မှု ရှိနေတယ်။ သူများကို ပိုနားလည်လေလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပိုနားလည်လေလေပဲ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စရိုက်မတူဘူး၊ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ မတူဘူး။ ဒါကြောင့် အခြေအနေတစ်ခုကို မြင်ပုံ ခံစားပုံ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပုံ မတူဘူး။ ကိုယ်မြင်သလို သူလည်းမြင်မယ်လို့ ပုံသေမတွေးပါနဲ့။ ငါမြင်သလို မမြင်ရကောင်းလားဆိုပြီး စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ရှင်းပြပါ။
အိမ်မှာ မေမေလုပ်တဲ့နည်းကို မျဝေလိုက်ပါတယ်။
ပုစွန်သေးသေး ၂၀ သားကို ခေါင်းဖြုတ်ပြီး ရေစင်အောင်ဆေးပါ ။
ဇကာနဲ့ရေခဏစစ်ထားပြီး ဆားကို ခါတိုင်းဟင်းချက်တာထက် နဲနဲပိုထည့်ပြီး နှံ့အောင်နယ်ပါ ။ နာရီဝက်လောက်ရေစစ်ထားပြီး ထမင်းပူပူနဲ့ ဆားနယ်ထားတဲ့ပုစွန်ကို ရောနယ်ပေးပါ။
နယ်ပြီးရင် ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းတဲ့ အနေတော်ဖန်ပုလင်းထဲကို ဖိသိပ်ပြီးထည့်ပါ။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအေးမြင့် အားကောင်းတဲ့ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ်မှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စဟာ စဉ်းစားစရာပဲဗျ။
ဝက်လက်မြို့နယ် သစ်စိမ့်ကြီးကျေးရွာက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးထွန်းအေးက အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ NLD အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ လှည့်လည်တာကို သွားကြိုဆိုတဲ့ ကျောင်းသား ၄၀ ကျော်ကို ကျောင်း အလံတိုင်ရှေ့မှာ တန်းစီခိုင်းပြီး ထန်းလက်တုတ်နဲ့ ရိုက်လို့ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဒီနေ့ထုတ် Daily Eleven သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသပေါ့။
ကလေးတွေက NLD ကို သွားကြိုတာ ကျောင်းချိန်အတွင်းဆိုရင်တော့ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ အရေးယူ သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများမြင်သာတဲ့ ကျောင်းရှေ့မှာ ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာ ကတော့ ကျောင်းဆရာ စိတ်ဓာတ်မရှိတာပဲလို့ ဆိုချင်သဗျာ။
‎Win Oo‎ to မြန်မာတို့ အတွက်မြန်မာ့ ဆေးမြီးတိုများ
သူ့ အမည်ကို ရွှေနွယ်ရိုး လို့ ခေါ်ကြပါတယ်..၊
အပင်က သစ်ခွပင်များလို အပင်မှာ တွယ်ကပ်ပြီး
ပေါက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..၊ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း
ခြုံကြီး ဖြစ်တဲ့အထိ ပေါက်ပါတယ်တဲ့..၊
Author: lubo601 | 7:14 PM | No မှတ်ချက် |
​ပြု​ပြင်​ထား​တဲ့ ​အ​သား​တွေ​ကြောင့် ​ကင်​ဆာ ​ဖြစ်​နိုင်
စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေနံစိမ်း စည်သန်းပေါင်း ၂၄ သန်းကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်
အဖွဲ့အစည်း သုံးခုအား အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အဖြစ် အစ္စရေး စာရင်းသွင်း
သွေးနီသားမှာ ကင်ဆာအန္တရာယ် ရှိမရှိ WHO ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်
​အာ​ဖ​ဂန် ​င​လျင်၊ ​နေ​ရာ​အ​နှံ့ ​လူ ၁၀၀ ​ကျော် ​သေ​ဆုံး
အသက်မဲ့နေသော နေပြည်တော်ဈေးများမှ လူမှုဘ၀ဒုက္ခများ
အကြမ်းဖက်သတင်းကြောင့် မောင်တောဒေသခံများ ခရီးသွားလာမှုရပ်ဆိုင်း
ဟောင်ကောင်နဲ့ မကာအို ပြေးဆွဲနေသည့် လွန်းပျံ စက်လှေနစ်မြုပ်
ကိုယ်လိုချင်တဲ့အစိုးရ ကိုယ်ရွေးပိုင်ခွင့် ဒေါ်စုလိုလား
အလုံကမ်းနားလမ်းပေါ်တွင် လေးနာရီအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုနှစ်ခုဖြစ်
မျိုးစောင့်ဥပဒေပြဌာန်းမှု ကျောက်ဖြူ မြို့က ထောက်ခံကြိုဆို
မိန်းမတယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ရုပ်ရည်နဲ့မသတ်မှတ်ဘူး။
သူ့အလှအပတရားကို သူဘယ်လောက် ထိန်းသိမ်းနိုင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ သတ်မှတ်တယ်။
Author: lubo601 | 7:33 PM | No မှတ်ချက် |
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနှင့် ခရီုနီတို့၏ ဖားကန့်
ကျောက်စိမ်းတွင်းများ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး သယံဇာတဓားပြမှု
အဖြစ် အမည်တပ်ခံရ ။
Author: lubo601 | 7:31 PM | 10 Comments |
ညတုန်းက မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၂၀၀ ကျော်ကို
စုစည်းပြီး တင်ပေးခဲ့တာ ပို့စ်က အရမ်းရှည်သွားတော့ ဖုန်းသမားတွေ ရှယ်လို့
မရ ဖြစ်သွားလို့ ၂ ခါခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အမှတ်စဉ် ( ၁၀၀ ) ကို မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု ( ၁ )
အဖြစ် သီးသန့် ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဗီဒီယို, လေ့လာရန် လမ်းညွန်
ထမင်းသိုးကို အိုးအသစ်ထဲ မထည့် ကြဖို့ ပြော
ပါတီရဲ့သမ္မတလောင်း လျာထားမှု အပေါ် ပြောဆိုနေတာဟာ သဘာဝ မကျ
ရွှေည၀ါဆရာတော် တရားပွဲ တားဆီးခံရခြင်းကြောင့် ဖျက်သိမ်းရ
ငွေတစ်ထောင်ပေးကာ သားမယား ပြုကျင့်သူအား ဖမ်းဆီး
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘို့ဒင်ကျေးရွာ အောင်နိုင်ရေး မိန့် ခွန်း ဟောပြောပွဲ (ရုပ်/သံ - ဓါတ်ပုံ)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပျားမွှတ်ကျေးရွာ အောင်နိုင်ရေး မိန့် ခွန်း ဟောပြောပွဲ (ရုပ်/သံ - ဓါတ်ပုံ)
ရှမ်းပြည်နယ် တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေး လာရသူတွေ နေရေး အခက်ကြုံ
အင်ဒိုနီးရှားတောမီး လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် လူ ၁ဝ ဦးထပ်မံသေဆုံး စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးအထိရှိ
ဆီးရီးယားစစ်ဘက်က အယ်လ်နျူဆရာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို သုတ်သင်
နောင်ချိုမူးယစ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ကာ ထွက်ပြေးခဲ့သူအား အသေဖမ်းဆီးရမိ
ရွေးကောက်ပွဲ မတည်ငြိမ်အောင် လုပ်မယ့်သူတွေ ရှိတယ်လို့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် သတိပေး
​ဘာ​သာ​ရေး ​မဲ​ဆွယ်​မှု​တွေ​အ​ပေါ် ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည် ​မေး​ခွန်း​ထုတ်
★ ★ ဘယ်လို … ဘယ်လို …. ပြန်ပြောစမ်းပါဦး သခင်မ နားကြားများလွဲလေသလားကွယ်
>>> ဟုတ်ပါတယ် သခင်မ … သခင်မကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က တွေ့ခွင့်တောင်းနေပါတယ် ….
★ ★ မဖြစ်နိုင်တာကွယ် … သခင်မဘ၀မှာ အမျိုးသမီးကတွေ့ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိင်တာပဲ … သူက ဘယ်သူလဲ … ဘာကိစ္စတဲ့တုန်း …
ကလေးတွေရှိပြီး မိန်းကလေးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ စောင့်ရှောက်ရတာ မလွယ်ဘူးလို့ အများကထင်ကြ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တခါမှ စိတ်ထဲမှာတောင် မတွေးမိခဲ့ပါ။ မိသားစုနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနေရ တာကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ပျော်လှပါတယ်။ သမီးတွေကို ဒီနေ့ထက် မနက်ဖြန် ပိုပြီးချစ်လာတာပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အားလုံးကိုမသိပင်မဲ့ သမီးတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လာတဲ့ ၁၁ နှစ်အတွင်း မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေက ၁၃ ချက်ရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့် သူတို့ချမ်းသာကြသလဲ ဘာကြောင့် ငါဒို့ဆင်းရဲ ကြသလဲ
Author: lubo601 | 12:26 PM | 1 Comment |
ကမ္ဘာကြီးမှာ နိင်ငံပေါင်း ၁၉၆ နိ်င်ငံရှိတယ်။ ဒီထဲက၂၅ နိင်ငံ က ကျိကျိတက် အချမ်းသာဆုံးနိင်ငံတွေ။ ဒီထဲက နိင်ငံ ၂၀ က ဆင်းရဲ နုံချာ လွန်းရှာတဲ့နိင်ငံတွေ။ ဒီဆင်းရဲ နုံချာလွန်းတဲ့ နိင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိင်ငံဟာရှေ့ ဆုံးက ပါနေတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ကနေဒါ၊ဖင်လန်၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျာမဏီ၊ ဗြိတိန်၊ ဂျပန်၊နယ်သာလန်၊ လူဇင်ဘတ်၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ စင်္ကပူ၊ ဟောင်ကောင် ၊ တိုင်ဝမ် ၊သြ စတီးယား၊ သြစတေးလျား၊ အိုင်ယာလန်၊ အိုက်စလန်၊ စပိန် ၊ အီတလီ တို့ ဖြစ်တယ်။
Author: lubo601 | 12:24 PM | No မှတ်ချက် |
ဘာသာရေးကို အသုံးချသူတွေကို အရေးယူဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ် လို့ ပြော
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မှော်တောကျေးရွာ အောင်နိုင်ရေး မိန့် ခွန်း ဟောပြောပွဲ (ရုပ်/သံ - ဓါတ်ပုံ)
အချိန်ပိုခိုင်းပြီး အချိန်ပိုကြေးမပေးလို့ အလုပ်သမား ၃ဝဝ ဆန္ဒပြ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုများ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပါတီကို လွတ်လပ်စွာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိဟုဆို
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ကျေးရွာများတွင် ဝမ်းရောဂါကြောင့် ၁၂ဦးသေဆုံး
ဆွာမြို့လယ်၌ ဆိုင်ကယ်နှင့် ၂၂ ဘီးကုန်တင်ယာဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိ၍ ဆိုင်ကယ်သမားသေဆုံး
​ ကျောက်​စိမ်း​တွေ ​ဘယ်​ရောက်​ကုန်​သ​လဲ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တကိုယ်တော် ဂုဏ်ပြုချီတက်တောင်းဆို
Author: lubo601 | 12:01 PM | No မှတ်ချက် |
ဓာတ်ခွဲခန်းထဲက ဘေ့စ်ဂစ်တာ (သို့) ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးသိပ္ဖံပညာရှင်(၁၀၀)ထဲမှ မြန်မာလူမျိုး နာနိုသိပ္ဖံပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာစောဝေလှ (Real Lives Real Stories)
Saw Wai Hla, Ph.D.
Professor,Physics and Astronomy Department
Ohio University , USA
“တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်ကျ ဘ၀မှာ နိုင်ငံတကာက သိတဲ့ ဂစ်တာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်”
၁၉၈၂ ခုနှစ် စိန်သြဂတ်စတင်းကျောင်းသား ၊ လီယိုဟေမာန် တီးဝိုင်းရဲ့ (၁၆)နှစ်သား ဘေ့စ်ဂစ်တာသမားလေး စောဝေလှ ရဲ့ တစ်ချိန်က ရည်မှန်းချက် ။
Author: lubo601 | 11:14 AM | No မှတ်ချက် |
ကိုယ်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံး အသက်ထွက်မဲ့အချိန်မှာ
Author: lubo601 | 11:13 AM | No မှတ်ချက် |
တရုတ်-မြန်မာ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုကုန်သွယ်မှုကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ မိသားစုအပါအ၀င် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးများက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားကြောင်း Global Witness အစီရင်ခံစာက ဖွင့်ချ
Author: lubo601 | 11:11 AM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုဖြစ်သော ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းများ၏ နောက်ကွယ်မှာ ယခင်စစ် အစိုးရဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ မိသားစုပိုင်ကုမ္ပဏီများအပါအ၀င် စစ်အစိုးရနှင့်နီးစပ်သော စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်များပါ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း ပဋိပက္ခများ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ နောက်ကွယ်ရှိ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်နေမှုများကို ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသော Global Witness မှ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင် အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Author: lubo601 | 11:08 AM | No မှတ်ချက် |
​မြန်​မာ့ ​ကျောက်​စိမ်း​လုပ်​ငန်း ​ထိပ်​ပိုင်း​လူ​နည်း​စု ​အ​ကျိုး​ရှိ
ဆာလာအိတ်ကြားဖြင့် ထုတ်ကာ စွန့်ပစ်ထားသည့် အမျိုးသမီး လူသေအလောင်း တာချီလိတ်မြို့ ၀မ်ကျောက်လုံ၌ တွေ့ရှိ
နောင်ချို အေးရှားဝေါလ်ဂိတ်အနီး မူးယစ်ရှာဖွေစဉ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသည့် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဗ.က.သ.များအဖွဲ့ ချုပ် စိုးရိမ်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေး ဗကသ ခေါင်းဆောင် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ
လောပိတ နောက်ကွယ်က မီးမလင်းတဲ့ ဘ၀တွေ
ကျောက်စိမ်းမှရသည့် သန်းပေါင်းထောင်ချီသော ဒေါ်လာများ ဘယ်သူတွေရဲ့အိတ်ကပ်ထဲ သွားသလဲ
အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်မည့် ပညာရေးစနစ် ဖော်ဆောင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် တာချီလိတ်တွင် ပြောကြား